Iswiidhen waddan qatar ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Howl-gal lagu sugayo amniga booqashada Obama oo Stockholm ka socda. Foto: Jacquelyn Martin/Scanpix.
Iswiidhen waddan qatar ah
La daabacay onsdag 28 augusti 2013 kl 10.21
Marka ay madaxda caalamiga ah booqasho ku yimaadaan Iswiidhen dadka badankiisa waxey araktidooda tahay in Iswiidhen tahay dal amni ah. Laakiin hey'ada amniga ee Mareykanka waxey Iswiidhen ugu qoran tahay liiska waddamada qatarta ah.
Hey'adaha amniga Mareykanka ayaa dhowrkii asbuuc ee ugu danbeeyey ku sugnaa Iswiidhen si ay amniga ugu adkeeyaan booqashada la filayo in Obama ku yimaado dalkan Iswiidhen. Olle Wästberg oo ahaan jirey qunsul Iswiidhen u fadhiyi jirey New York ayaa sharaxaya sababta ay hey'ada amniga Mareykanka ugu arkaan Iswiidhen dal qatar ah.
- Waxey fiirinayaan waxii horey u dhacey. Ruux is-qarxiyey mudo hada laga joogo dhowr sanno iyo labo siyaasiin oo la diley. Waxaan maleynayaa in ay waxyaabahaas ka dhigayaan in Secret Servise u aragto Iswiidhen dal aan sidaas amni u aheyn, ayuu Olle Wästberg.
Waxuu si gooni ah u xasuusta mar uu Ra'iisal wasaarihii hore ee Iswiidhen Göran Persson booqasho ku tagey New York sida amnigiisa loo sugey ayada oo ay aheyd waxyar ka bacdii markii la diley wasiiradii arimaha dibada dalkan Anna Lindh.
- Waxyar ka bacdii markii aan hotelkiisa geyney Persson ayaa waxaan weydiiyey madaxii Secret Service in ay sidaan u ilaaliyaan dhamaan Ra'iisalwassarayaasho u soo martiya, waxuuna igu yeri "keliya waddamada qatarta ah". Waxaan ku sii iri "Xataa Iswiidhen", markaasuu intuu fiiriyey waraaqahiisa igu yeri "labo dil oo weliba mid la xalin" marka waxaan u jirnaah liiska waddamda qatarta ah ayuu yeri Olle Wästberg.
Howl-galka loogu jiro sugida amniga magaalo madaxda Iswiidhen ayaa ah mid aad u weyn ayada oo ay tahay markii ugu horeysey oo madaxweyne Mareykan talada haya uu booqasho rasmi ah ku yimaado Stockholm. Ku dhawaad 2 000 booliis ah ayaa loo diyaariyey sugida amniga inta lagu jiro labada malmood oo ay booqashadan qaadaneyso.
Madaxweyne Obma waxaa booqaashiisa ku wehliya ku dhawaad 500 oo ruux.